Dhammaan khiyaanooyinka iPhone X si looga faa'iideysto | Wararka IPhone
Luis Padilla | | iPhone X, Casharrada iyo buugaagta
IPhone X wuxuu ahaa isbadal weyn tan iyo markii Apple ay soo saartay noocii ugu horeeyay ee casriga ugu caansan adduunka, in ka badan toban sano ka hor. Kaliya maahan kani naqshad cusub oo aan xaddidneyn, laakiin Apple ayaa tirtiray badhanka guriga, tanna marka lagu daro isbeddelka bilicsanaanta waxay muujineysaa in habka aan u maaraynno aaladda sidoo kale isbeddelay.
Xiritaanka barnaamijyada, furitaanka howlo badan, dib-u-noolaansho, bedelida barnaamijyada, xarunta kontoroolka, xarunta ogeysiinta ama xitaa daminta aaladda shaqooyinka loo sameeyo si ka duwan wixii ku saabsan iPhone X intii aan u baranay tan iyo markii ugu horreysay ee iPhone soo muuqatay. Fiidiyowgaan iyo qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan isbeddelada si aad u ogaatid sida loo maareeyo iPhone X laga bilaabo maalinta koowaad.
1 Multitask oo ku beddela barnaamijyada tilmaam
2 Hal-taabasho shaashad baraarujin
3 Xarunta xakamaynta, aaladaha iyo xarunta wargelinta
4 Xir, shaashadda, Apple Pay iyo Siri
Multitask oo ku beddela barnaamijyada tilmaam
Ma jiro badhanka bilowga, ma jiro cabsi dambe oo argagax leh oo ay qabaan qaar ka mid ah adeegsadayaasha oo isticmaalay badhanka muuqaalka ee shaashadda laga soo bilaabo maalinta ugu horreysa si badhanka muuqaalka ee iPhone uusan u jabin. Ugu dambeyntiina, sannado ka dib raadinta codsiyada Cydia iyada oo loo marayo ailbreak, waxaan u isticmaali karnaa iPhone-geena gebi ahaanba tilmaamaha. Xiritaanka arjiga, furitaanka shaqooyin badan iyo kala beddelka codsiyada waa dhaqso iyo fudeyd mahadnaqyada.
Xidh codsiyada adiga oo ka maraya dhinaca hoose ee shaashadda
Ku fur hawlo badan isla tilmaanta laakiin hoos ugu taag dhamaadka dhamaadka shaashadda
U kala beddel codsiyada adigoo u riixaya dhinaca hoose ee shaashadda, bidix ilaa midig.
Waxa jira tilmaam kale oo aanu Apple noo sheegin, laakiin taasi waxay noo oggolaanaysaa inaanu furno hawlo badan oo ka dhakhso badan tilmaanta rasmiga ah, taasna waa iyadoo laga soo weecdo geeska bidix ee hoose ilaa geeska midig ee sare, si jaantus ah. Tan waxaan ku fureynaa shaqo badan isla markiiba, tilmaam marka aad la qabsatid aad uga raaxo badan intii aad u simbiriirixan lahayd shaashadda dhexdeeda oo aad ilbiriqsi xajisato.
Marka laga hadlayo beddelka codsiyada, tilmaamidda isweydaarsiga dhinaca hoose ee shaashadda bidix ilaa midig ayaa kuu gudbineysa dalabkii aad horay u isticmaali jirtay, haddii aad ku celcelisana waxaad ku dhex mari doontaa dhammaan codsiyada sida ay u kala horreeyaan. . Haddii hal mar oo barnaamij ah aad sameyso tilmaam ka soo horjeedda, min midig ilaa bidix, waxaad dib ugu laaban doontaa tii hore, iyo wixii la mid ah, illaa iyo xilliga aad adeegsanayso dalab. Mar haddii dalab mar horeba loo adeegsaday shay, waxay noqoneysaa kii ugu horreeyay ee taariikheed ahaan iyo tilmaanta midig ilaa bidix mar dambe shaqeyso, illaa aad ku celiso qalliinka.
Hal-taabasho shaashad baraarujin
Jiilal dhowr ah, IPhone ayaa dhaqaajiyay shaashaddiisa markii uu rarayo (laga bilaabo iPhone 6s iyo wixii ka dambeeya). Haddii aad miiskaaga ku haysato iPhone-kaaga oo aad u qaadatay si aad u eegto, uma baahnid inaad wax uun sameyso si shaashadda ay u daarto Laakiin hadda iPhone X wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad dhaqaajiso shaashadda adoo taabanaya, qasabad yarna dul saaran.. Intaa waxaa sii dheer, badhanka dhinaca ayaa waliba shidi doona shaashadda haddii aan riixno.
Waxaan sidoo kale ku jirnaa shaashadda qufulka oo leh laba dariiq oo cusub: kamarad iyo toosh. Kaamiradu wey inala joogeysay isla markaana tilmaamida ka dhaqaaqida midig ilaa bidix ayaa si toos ah u furey arjiga si aan uqabano sawiro ama muuqaalo, laakiin hada waxaan sidoo kale heysanaa ikhtiyaarkan cusub. Labada badhan, labadaba kamaradda iyo tooshku, ayaa lagu hawlgeliyaa iyadoo lagu fulinayo 3D Touch iyaga, taasi waa, ma aha oo kaliya inaad taabato laakiin adigoo si adag shaashadda ugu riixaya. Runtii waa ku qanacsanahay in labada shaqaba laga heli karo shaashadda qufulka oo aan xitaa loo baahnayn in la furo xarunta kontoroolka si loo furo.
Xarunta xakamaynta, aaladaha iyo xarunta wargelinta
Saddexdaan walxaha caadiga ah ee macruufka ah ayaa sidoo kale xoogaa wax looga beddelay iPhone X. Xarunta xakamaynta ayaa laga yaabaa inay tahay walxaha ugu murugsan marka hore kuwa soo qaadaya iPhone X iyagoon waxba ka ogeyn isbeddelkiisa, maxaa yeelay tilmaamku inuu soo bandhigo waa xag jir ahaan ka duwan. Haddii ka hor intaanan isticmaalin ikhtiyaarka ah inaan ku xoqno hoose ilaa sare shaashad kasta oo iOS ah si loo muujiyo xarunta xakamaynta, hadda waxaa lagu gaarayaa iyadoo laga soo booday korka shaashadda, geeska midig ee kore, hoos.
Waana in laga sameeyaa dhinaca kore ee midig, maxaa yeelay haddii aan ka sameyno qayb kale oo ka mid ah shaashadda kore, waxa furi doona waxay noqon doontaa xarunta ogeysiinta, oo la mid ah shaashadda qufulka ee iOS 11, xitaa iyadoo la raacayo toobiyeyaasha tooshka iyo kamarad. Marka la eego xarunta ogeysiinta kaliya waxay muujineysaa ogeysiisyo dhowaanahan, haddii aan rabno inaan aragno kuwa ugu da'da weyn waa inaan hoos uga dhaqaaqnaa xagga hoose in la soo bandhigo, haddii ay jiraan. Ku sameynta 3D Touch "x" ee xarunta ogeysiinta ayaa na siin doonta ikhtiyaar aan ku tirtirno dhammaan ogeysiisyada hal mar.
Oo meeday wijaajooyinku? Shaashadda qufulka iyo boodhka labadaba walxahaas wali isma beddelo, weli waa "bidixda". Laga soo bilaabo desktop-ka ugu weyn, shaashadda qufulka ama xarunta ogeysiinta waxaan ka furi karnaa shaashadda widget-yada bidix u leexashada bidix ilaa midig, isla shaashaddaasna waanu tafatiri karnaa, ku dari karnaa ama tirtiri karnaa si ay noogu sii socoto.
Xir, shaashadda, Apple Pay iyo Siri
Fiiro u yeelo in waqtigan oo dhan aanan ka hadlin wax badhan muuqaal ah, waana muuqaalka ugu weyn ee iPhone X. Laakiin weli waxaa jira batoon u adeegaya shaqooyinka qaarkood, sida Siri, Apple Pay, dami qalabka ama shaashadda iska qaad: badhanka dhinaca. Hawlgalkeeduna wax badan buu iska beddelay oo isagu waa kii ugu jahwareerka badnaa markii hore.
Si loo bixiyo Apple Pay, waa inaan hadda u bilownaa hawsha qaab la mid ah sida loogu isticmaalo Apple Watch bilawgii: adigoo riixaya badhanka dhinaca laba jeer. Waxaa naloo aqoonsan doonaa Face ID ka dibna waxaan ku bixin karnaa boosteejada akhristaha kaarka. Kahor intaadan u dhowaan iPhone taleefanka Apple Pay, si toos ah ayuu u furmay, laakiin maxaa yeelay waxay ahayd inaan si miyir qab ah u dhigno faraha Aaladda Aqoonsiga Taabashada. Maaddaama hadda aqoonsiga wajiga uu ku dhow yahay isla markiiba markii la fiirinayo iPhone-ka, macruufka ayaa na weydiinaya inaan noqonno kuwa si miyir-qab ah u dhaqaajinaya Apple Pay si looga fogaado dhibaatooyinka.
Siri wali waxaa adeegsada amarka codka "Hey Siri", illaa iyo inta aan u habeynayno inta lagu gudajiro u-habeynta bilowga ah ee barnaamijyada macruufka ee iPhone-keena. Laakiin waxaan sidoo kale isticmaali karnaa badhanka jirka si aan u furno kaaliyaha dalwaddii Apple: adoo hoos u dhigaya badhanka dhinaca. Tani hadda maahan tilmaam in la damiyo qalabka, laakiin waa in wax laga weydiiyo Siri.
Sideen u damiyaa xarunta? Waa hagaag, adoo riixaya isla mar ahaantaana badhanka mugga (wax kasta) iyo badhanka dhinaca. Shaashadda gurmadka degdegga ah ee IOS ayaa furi doonta ikhtiyaarka ah inaad wicitaan degdeg ah samayso ama aad damiso iPhone-ka. Xusuusnow in haddii shaashadani u muuqato Aqoonsiga Face-ka uu naafo noqon doono illaa aad ka gasho lambarkaaga furaha mar kale.
Ugu dambeyntii, shaashadda ayaa sidoo kale ku beddeleysa iPhone X, haddana waxaa lagu sameeyaa iyadoo la riixayo badhanka dhinaca iyo badhanka mugga. Sidii horeyba u dhacday tan iyo markii la bilaabay macruufka 11, waxaan wax ka beddeli karnaa shaashadaas, dalagga, ku dar faahfaahin, iwm ka dibna la wadaagno meesha aan dooneyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Dhamaan tabaha iPhone X si aad uga faa iideysato
Waxaad sidoo kale furi kartaa howlo badan adigoo ka soo dhex dhacaya bartamaha hoose adiga oo aan ku hayn xarunta ilbiriqsi.
Si fudud ayaa loo boodayaa iyo markaad xarunta timaaddo istaag oo sii daa. Isla markiiba wuxuu furaa shaqooyin badan.
Farqiga aad u leedahay inaad u aaddo saxanka ayaa ah in markaad u aaddo saxanka aad simbiriirixato adigoon istaagin. Haddii ay ogaato inaad joojiso xitaa toban meelood meel ilbiriqsi ah, oo aad sii deyso, shaqooyin badan ayaa furmaya.
Xaqiiqda sugitaanka magaca labaad ee caanka ah ee aad tiraahdo, waxaa kaliya u sabab ah animation-ka oo waqti ku qaadanaya inuu ka soo muuqdo inta ka hartay "xarfaha" ee codsiyada bidixda. Laakiin runti maahan inaad sugto inta ay animation-ka ka muuqaneyso, iskuday bartamaha ilaa kor, jooji oo sii daa isla waqtigaas.
Ku jawaab iñaki
Xagee ka heli karaa warqada furan ee furan?
Ku jawaab Ezio Auditore
Iyo markii aan kahor shaashadda 5aad ee iPhone-kaaga oo aad rabtay inaad dib ugu laabato shaashadii ugu horreysay, adigoo riixaya badhanka guriga ayaa kuu geynaya shaashadda ugu horreysa, iyadoo iPhone X kan uusan jirin, sax?
Ku keydi batterigaaga iPhone X adoo joojinaya 'Riix si aad u shaqeyso'